Jabuuti oo qiratay in 3 Askari looga dilay Qaraxii Beledweyne. | Baydhabo Online
Jabuuti oo qiratay in 3 Askari looga dilay Qaraxii Beledweyne.
Afhayeenka Ciiddanka Qalabka Sida ee dalka Jabuuti, Kabtan Rashiid Xaashi ayaa xaqiijiyey in 3 ka tirsan Ciiddanka Jabuuti ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM shalay lagu dilay Is-qarxintii ay Xarakadda Alshabaab shalay la beegsadeen Saldhigga Ciiddanka Jabuuti ku leeyihiin Galbeedka magaalladda Beled-weyne.
Afhayeenka oo ka hadlay Telefishinka Qaranka Jabuuti waxa kale oo uu sheegay inay 6 Askari ku dhaawacantay weerarkaasi oo loo adeegsaday Gaari Xamuul oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Dhinaca kale, Madaxwynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Guuleed ayaa ku bogaadiyey Ciiddanka Jabuuti sida ay uga hor tegeen Weerarkii shalay lagu soo qaaday Saldhigooda ku yaalla Galbeedka magaalladda Beled-weyne.
Waxa uu ugu baaqay Ciiddanka Jabuuti ee ka tirsan AMISOM inay sii wadaan Dadaalka ay ugu jiraan Soo-celinta Nabadda Somalia iyo Dadaalka Dib-u-dhiska Somalia.
Afhayeenka Xarakadda Alshabaab ee Hawlgalladda, Sheekh C/casiis Abu Muscab oo la hadlay Wakaalladda Wraarka REUTERS ayaa sheegay inay 17 Askari oo Jabuutiyaan ah ku dileen weerarkii Is-qarxintii ee shalay ka dhacay Saldhigga Ciiddanka Jabuuti ku leeyihiin duleeka Galbeed ee magaalladda Beled-weyne.